ရှက်စရာ ကြီး…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရှက်စရာ ကြီး….
- we R one
Posted by we R one on Jun 10, 2011 in Creative Writing | 20 comments
ဟိုး… ကမ္ဘာဦး ကတည်း ကလူတွေဟာ သူတို့အတွက် ရှက်စလို့ ထင်တဲ့အရာ တွေ ကို တစ်ခုခု နဲ ဖုံးကွယ်ထားကြတယ်။ အခု လက်ရှိ လည်းအပေါ်ပိုင်းဆိုရင် အကျီင်္ ၊ အောက်ပိုင်းဆိုရင် ဘောင်ဘီ၊ ထမီး ၊ စကပ် စသဖြင့် ၀တ်ဆင်ပြီး သူတို့ ရဲ့ ရှက်စရာလို့ ထင်တဲ့ အရာတွေ ကို ဖုံးကွယ်..ထားကြတယ်…
တကယ်လို့ များ အခုအချိန်မှာ ရှက်စရာ လိုထင်နေတဲ့ အရာတွေ ကို အရင် ကတည်း က ရှက်စရာလို့ မထင်ပဲ နဲ..
လက်တို့ ၊ မျက်နှာ တို့ ၊ ခြေထောက် တို့ အဲဒါ တွေ ကို ရှက်စရာလို့ ထင်ပြီး.. အ၀တ်တွေနဲ အုတ်ထားမယ် ဆိုပါစို့.. သူတို့အတွက် ရှက်စရာ လို့ မထင်တဲ့ အရာပေါ့ နော် ..တင်ပါး တို့.. ,………., …….. တို့ ကိုဖော်ထားခဲ့မယ် ဆိုရင်.. လူတိုင်း အဲလိုကြီးပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့ နော်… ဟိဟိ
လက်ကလေး ပေါ်နေမယ် ဆိုရင် ” ဒီကောင်မလေး အရှက်ကို မရှိဘူး.. လက်ပေါ်နေတယ် ” “အခုခေတ် မိန်းကလေးတွေ များ မပြောချင် ဘူး ..ခြေထောက်တွေ ပေါ်လို့..” လို့ ပြောကြမယ် ထင်တယ်နော်… ” လက်ကလေး ကြည့်ပါရစေ ဆိုရင် အော် ရှက်စရာ ကြီး၊ မျက်နှာလေး မြင်ချင်လို့ပါ.. ဆိုရင် အော် ရှက်စရာ ကြီး..):D
About we R one
has written 65 post in this Website..
View all posts by we R one →
အဟီး ဟုတ်တယ်နော်၊ ရှက်စရာကြီး လာကြည့်နဲ့တော့ မျက်နှာကို ဟိဟိ
ရှက်စရာလို့ သဘော ထားလို့ လူကွယ်ရာမှာ စားတာ ပြန်ထုတ်ကြတယ်။
ကျန်းမာရေး အရလည်း လူတွေ ကြားထဲ မကောင်းဘူး ဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။
ရှာရှာ ပေါက်ပေါက် ပြောပဲ ပြောတတ်လွန်းတယ်
ရှက်စရာကြီးတွေ လာမကြောနဲ့ ကွယ်… ရှက်လို့ ………တော့မယ်..
မျက်လုံးလေး တော့ ဖော်ထားမှာပေါ့ ..:D
အော် အပေါက်ကလေးနဲ မို့ မြင်ရမှာပေါ့.. ..
အပေါက်လေးနဲ့ ဆိုတော့ ပိုတောင်ရှက်စရာကောင်းသေးတယ်..။
အဟီး ရှက်စရာကြီးနော် ပြောလဲပြောတတ်ပေါ့ ဘယ်လိုဦးနှောက်နဲ့များ စဉ်းစားလဲမသိဘူးနော်
ပြောရမှာ ရှက်လို့ မပြော တော့ပါဘူး။ ရှက်လို့…..
မိန်းကလေးတွေရဲ့အလှက ဖုံးထားလို့ ငါတို့က ပိုပြီးကြည့်ချင်တာနေမှာတဲ့။
ကမ္ဘာဦးကလူများလို သဘာဝအတိုင်းသာ နေခဲ့ကြရင် ဘာမှ စိတ်ဝင်စားစရာရှိမှာမဟုတ်တော့
Cherry Phyo says:
ဒါပေမဲ့ လူတွေက မွေးထဲက အရှက်မရှိတာနော်။
ဘာလိုလဲဆိုတော့ ဘာမှ ပါမလာလို့လေ ?????
Big Defender says:
ဟုတ်ပါ့ ရှက်စရာကြီး.. ပြောရင်ချက်လား ပြီ.. အဲမှားလို့ ရှက်လာပြီ…:D
Shar Thet Man on စု စကား – NYC 9/18/16
Shar Thet Man on ၃မိနစ် ဓာတ်ပုံ Instant Photography
aye.kk on မျောက်ညို
Shar Thet Man on စလုံးမြေ မှ ကိုရီးယားဆိုင် – KZ’s Food Review, Singapore
Shar Thet Man on ၁။ ၀င်စို့ ထွက်စို့
Shar Thet Man on ဖွဲ့စည်းပုံ ၉
Shar Thet Man (65940 Kyats )